3 stotụnanya Stats akwado Social ere | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 15, 2015 Saturday, March 14, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime njirimara ndị m na-ahụ na ndị mmepe azụmaahịa kachasị dị mma ma ọ bụ ndị ọrụ ahịa bụ na ha ejikọgoro nke ọma.
Ezigbo enyi m Doug Theis nke Innovative Integrations, ihe Ndị ụlọ ọrụ na-elekọta ọrụ na Indianapolis bụ otu n'ime ndị ahụ. Anyị gara nri ụtụtụ Indianapolis Business Journal m wee kpaa ọchị na Doug nwere ike ịmara onye ọ bụla nọ n'ime ụlọ ahụ. N'ezie, onye ọrụ ibe anyị Harry Howe - onye Doug mere ka m nweta tiketi ga - enye m ndụmọdụ na uto na oganihu of DK New Media.
Doug amaghi onye obula, o na - ewe oge iji mee ka ndi mmadu mara ya. Uru ahụ emeela ka ọ bụrụ ezigbo akụ na ahịa teknụzụ Indianapolis. Ma, n'ezie, ọ na-eme ka Doug rụọ ọrụ na-ere ọfụma ebe ọ bụ na ọ tụkwasịrị obi ma nwee njikọ mgbe niile.
N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụghị ihe ijuanya na enwerekwa ọnụọgụgụ nke na-enye ihe akaebe na ịnwe usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ọma na ịkparịta ụka n'isntanet dị oke mkpa:
78% nke ndị na-ere ahịa eji usoro mgbasa ozi eme ihe ndị ọgbọ ha.
73% nke ndị na-ere ahịa na-eji na-elekọta mmadụ na-ere outperformed ndị ọgbọ ha.
60% nweta ihe ndi ozo maka ndị na-ere ahịa na-ere ahịa mmadụ.
Abtọ onwe gị na soshal midia, ige ntị nke ọma maka ohere ijere obodo gị ozi, na itinye aka na soshal midia bụ 3 usoro dị mfe nke Salesforce kọwara maka ire ere na-elekọta mmadụ. Inye uru, ịtọnye ma tinye onwe gị dịka ihe enyemaka dị oke mkpa n'ịre ahịa ọganiihu n'ịntanetị!
Kedụ ka azụmaahịa nwere ike isi nyere aka ire ere?
Otu ndi ahia gi bu ndi okacha amara nkwukọrịta ndi n’ilezi anya na nmekorita ebumnuche ma nyere aka inweta olile anya igafe ogwugwu. Nke ahụ kwuru, ha bụkwa ndị ọkachamara na ebe a mkpa nke atụmanya kwa ụbọchị. Ndi ngalaba ahia gi n’enye ọdịnaya di nkpa iji nyere ha aka iwulite uru ma dobe onwe ha dika ihe enyemaka? Ihe omumu, akuko onye oru, akwukwo ocha, ihe omuma ... ihe ndi ahu nile nwere ike inyere ha aka ime ka ndi okacha ahia gi mara nma na ntanetị ma nye uru ha choro.
Tags: ndị ahịainfographic ahịana-elekọta mmadụ na-ere
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi: Ọrụ Email siri ike maka Agency ma ọ bụ Business